Podcast 2x09 an'ny Actualidad iPad: Apple TV vaovao, Betas ary maro hafa | Vaovao IPhone
Tamin'ny fizarana tamin'ity herinandro ity dia niresaka momba ny Betas an'ny Apple TV vaovao izahay. Vao tonga tao amin'ny Apple Stores ny fitaovana fampitaovana haino aman-jery Apple ary mandray izany amin'ny heviny tsara ireo mpampiasa. Na eo aza ny App Store mbola tsy dia misy loatra ary misy olana sasany amin'ny andiany voalohany amin'ny tvOS, ny Apple TV vaovao dia mampiseho ny tenany ho fitaovana mihoatra ny mampanantena. Niresaka ihany koa izahay momba ny fanavaozana iOS, OS X ary tvOS vaovao, fanavaozana WhatsApp sy Tweetbot, ary izay azonay resahina. Halahelo azy ve ianao ?.
Henoy ny »2 × 09: The New Apple TV, Betas ary bebe kokoa» ao amin'ny Spreaker.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Vaovao IPhone » Podcast » 2 × 09 Podcast an'ny Actualidad iPad: Apple TV vaovao, Betas ary maro hafa
Izany no mahatonga ny Siri for Apple TV voafetra amin'ny firenena valo